फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - भिक्षा मागेको शिक्षा
भिक्षा मागेको शिक्षा देवीप्रसाद घिमिरे
हरेक सफलताका पछाडि एउटा निश्चित दृष्टिकोण हुन्छ । विना दृष्टिकोणको कार्य सधैँ शून्यमा परिणत हुन्छ । भनिन्छ, हजारौँ माइलको यात्रा मात्र एउटा विन्दुबाट सुरु हुन्छ । आजको अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक जीवन यात्रामा मानिसलाई गाँस, बास जत्तिकै अनिवार्य भएको छ शिक्षा । शिक्षाविनाको जीवन र गुदीविनाको फल उस्तै उस्तै हुन्छ । हामी आफूभित्रका हजारौँ सपनाहरू आफ्नै अकर्मण्यताका कारण क्षण क्षणमा हत्या गरिरहेका हुन्छौँ । केवल कल्पनामा बाँच्ने हाम्रो स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने आजसम्म कोही जन्मन सकेको छैन । विकसित राष्ट्रका बालकहरू विज्ञानसँग खेल्छन् । अन्तरिक्षमा रमाउने सपना देख्छन्, त्यो सपना पुरा गर्ने वातावरण सरकारले उपलब्ध गराउँछ अनि प्रत्येक सपना साकार हुन्छन् । आज मेरो देशका केटाकेटीहरू अझै बालुवामा शून्यताभित्र शून्यको खोजी गरिरहेका छन् ।
केही बुझ्नेहरू रातदिन मुसादौडमा सहभागी छन् मात्र आफू बाँच्नका लागि । बाँचेर बाँच्न देऊ भन्ने यथार्थ कक्षामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । आज लामो समय कठोर दुःख सहेर भर्खर ताते गर्न लागेको शिक्षालाई घाँटी निमोठ्न विभिन्न नीति निर्माताहरू नै लागेको देख्दा यो देशमा साँच्चै नै सतीले सरापेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । आज देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो अपरिहार्य आवश्यकता पुरा गर्न विदेशी दातासँग भिख माग्नुपर्छ । त्यो पनि समयमा पाइँदैन । पाए पनि नब्बे प्रतिशत चाहिँ गोष्ठी र सेमिनारमै झ्वाम्म पारेर केवल दश प्रतिशत कार्यान्वयनका लागि कार्यक्षेत्रमा पुग्छ अनि कसरी सुधार हुन्छ स्वास्थ्यको ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखान यहाँ सार्थक भएको छ । यदि तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने एक चोटि शिक्षा नियमावली पल्टाएर हेर्नुस् न, चुरो कुरो ज्ञान भइहाल्छ नि !
देशको शैक्षिक अभाव पुरा गर्न हाल देशमा निजी विद्यालय प्रशस्त खोलिएका छन् । सरकारी विद्यालयको तुलनामा राम्रै गुणस्तर कायम पनि गरेका छन् तर अब अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता गराएर उनीहरूलाई न घरको न घाटको बनाइएको छ । कम्पनी ऐन मानून् कि शिक्षा ऐन मानून् ती बिचराहरूले ! एउटै व्यक्तिले दुई वटा नाउमा खुट्टा हाले जस्तो भएन र यो त ? हिजोका कुर्सीमा बसेर कलम घुमाउनेहरूले यस समस्याका बारेमा सोचेनन् । त्यसैले अब नेपालमा बिस्तारै शिक्षा नियोजनतर्फ लाग्दै छ ।
पहिले भगवान्ले अत्यन्त राम्रो प्राणी बनाउँछु भनेर ठुलो परिश्रम गर्दागर्दै उँट बनेपछि दिग्दार भएर गुप्तवासमा ध्यानमग्न भए रे ! आजको नेपालको शिक्षा पनि अलिकति बेलायत, अलिकति भारत, अलिकति अमेरिकाको छनक छ तर आफ्नोपन हराएर ब्रह्माजीको उँट जस्तै बनेको छ । यसलाई बेलैमा सोचेर योग्य व्यक्तिले विवेक नपु¥याए अब शिक्षा विस्तार होइन, धेरै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् । यति धेरै शिक्षामा लगानी भए पनि उपलब्धि शून्य छ ।
झापा, हाल : काठमाडौं